Nolosheyda wey burburtay kadib markii ninkeyga naag kale guursaday anigana ifuray, Laakiin ilaaha ujeedo - iftineducation.com
iftineducation.com – “Nolosheyda wey burburtay kadib markii ninkeyga naag kale guursaday anigana ifuray, Laakiin ilaahey ma hurdo”
Qisadaan waxaa noo soo dirtay gabadha faadumo(magaca saxda mahan) ka mid ah aqristayaasha webkaan oo dooneysa iney nala wadaagto
qoraalkeeda ayay sidaan ku bilowday faadumo
Ilustrasi. | Foto: copyright Unpopulart – Hendieta & Garuda
Waxaan ahaa agbar aad u quruxbadan waxaan is jecleen wiil aan isku xaafad ahaan jirnay yaraanteenii waxuu ilaah noo kasay inaan yurub wada imaano anagoo si kala gooni ah u kala imaanay
wiilkaan is jecleen waan is guursanay waxaa u dhalay sadax caruur ah oo masha allah hada noo koray waxaan ku nooleen nolol fiican, ninkeyga shaqa iska mac mal ayuu heestay xafiiska ilaa markii danbe la dalacsiiyay jagana loo magacaabay. mushaarkiisana loo kordhiyay aad ayaan ugu farxay.
Balse waxaa dhacday in ninkeeygii markii la dalacsiiyay uu iska badalay siduu ii ahaan jiray wax badan iska badaleen dabeecadiisa ilaa aan markii danbe ka shakiyay
gabar iskala shaqeeyaan xafiiska ayaan u sheegtay waxa igu dhacay gabadhii ayaana ii sheegtay in ninkeeyga mar walbo xafiiska isla haasawan gabar kala shaqeeso xafiiska.
Maalinkaas ayaa aad u qararacmay oo waxey ila noqotay inuu cirka soo dumay,
aan idiin soo gaabiyo sheekadee ninkeeygi maalintaas waxii ka danbeyay buuqeena ayaa batay iyo dagaalkeena
ilaa markii danbe uu igu dhahay waan ku furaayaa waxaana guursanaayaa gabadha ay iskala shaqeeyaan xafiiska sidaasna uu igu furay aniga.
laakiin raxmada allah swt kama quusan oo waan ka sabray ninkeygi aan ilmaha u dhalay
mudo 6 bilood ah ka dib ayaa waxaan is baray wiil asagana hori guur u soo maray balse hada single ah oo run ahaantii aad u wanaagsan caruurteydiina igu rabo asagii ayana guursaday oo hada waxaan is qabnaa mudo laba sana ah waxaana kuwada nool nahay farxad ka badan midaan ku noolaa markii hore
Qofkii sabraa sadkiisa helo ee gabdhoow sabra wax ka fiican ayuu allah idiin kugu badalaa (Aadan yo)